Saafi Films - News: DAAWO SAWIRO:Haweeney Hindi ah oo sheegatay inay 113-sano jir tahay qofka ugu da�ada weyn
DAAWO SAWIRO:Haweeney Hindi ah oo sheegatay inay 113-sano jir tahay qofka ugu da�ada weyn
Haweeney lagu magacaabo Zeenat Bi oo ku nool magaalada Bhopal ee dalka India ayaa sheegtay inay tahay 113 sano jir ayna tahay haweeneyda ugu da�da weyn caalamka, hase yeeshee dowlada Hindiya ayaa waxa u diiwaangashan in ay tahay 101 sano jir.
Haweeneydan ayaa haddii da�ada ay sheeganayso tahay mid sax ah ayaa waxaa ay dhalatay xilligii Queen Victoria ay xukumi jirtey Ingiriiska. Waxaynta sheegtay in ay soo joogtay xilli magaaloyinka dalka Hindiya ay ahaayeen kuwo keymo ah oo meel kasta ay geedo ahaayeen.
�Waxaan xusuustaa xilligii ay dowlada Britishka ay ku amreen dadka reer Hindiya inay cunaan rootiga iyadoo aysan hore dadka Hindida ah u cunijirin rootiga.�
Ms Bi ayaa waxa ka hartay dhamaan qoyskeeda hase yeeshee waxaa ku dhacay cudurka cataracts iyo cudur lafaha ka galay hase ahaatee waxa ay ku nooleyd lacag ay dowlada Hindiya siiso howlgabka oo dhan 275 ruppes oo u dhiganta (�3.19).
Iyadoo ka hadlaysa nolosheeda ayaa waxa ay tiri: �inku dhow 50 sano ayaan kaligey noolaa,weligeyna ma guursan ilmana ma dhalin.
�Waxa kaliya oo aan haysto waxa ay tahay waa sariir yar taasoo hadiyad ahaan iigu keentay guddoomiyihii hore ee gobolka Uma Bharti kaasoo bil walba ii soo diri jirey 2500 rupees (�30).balse ma jiro cid kale oo i xasuusta.
Haweeneydan sheegatay inay tahay tan ugu da�ada weyn caalamka ayaa waxaa ay tahay mid aad u jecel inay la kulanto jilaaga hindiga ee Salman Khan.
4,487,019 unique visits